fauxet fandroana nickel tokana nokosorana
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana finday / WOWOW 3 Hole 4 Inch Centerset Faucet
Faucet nandona ny fomba nodi-fomba miloko mahazatra:
Damba mitafy faucity vanja azo ekena ho an'ny trano manofa trano, condominium vaovao, tokantrano tokana, trano mandeha môtô, tranom-pitaterana ary fampiasana olona.
2320700 torolàlana fametrahana
fehikibo natsipaka natsipitsahana 2320700 antsipirihany:
Mitahiry vola sy rano aminao: naorina ao amin'ny 1.2gpm neoperl aerator, manome fihaonana amin'ny fanasana milamina, misy rano 20 isanjatony latsaka noho ny mahazatra, mitahiry ny volanao nefa tsy mampandefitra.
Ny fahadiovana hampiasa ny fivoriam-pako dia misy: fa ny nosy mandro mandro dia misy fivoriam-pako metaly, ny rano dia avy amin'ny fantsom-baravarankely amin'ny alàlan'ny fanosehana ny tsangam-baravarankely, hisorohana ny fanasan-tànana voasasa.
Kitapo seramisy tsy misy rano: namboarina amin'ny kapôty misy sefo seramisy ambony, mihodina tsara mba hiantoka ny fanamafisana ny hafanana amin'ny rano sy ny fampiasana maharitra mandritra ny fotoana tsy anaovana.
Fampiasana azo antoka: fahazoan-dàlana avy aminay ny fantson-drano fandroana rehetra, nsf61-9, ny toeran'ny raharaham-barotra maimaim-poana 1953. Ny vatana faucet dia noforonina amin'ny metaly feno, matanjaka ary mateza.
Nomena toky voafetra ny fiainana: manome toky izahay mandritra ny 3 taona hihoatra ny leaks, ny drip, ny fracture ary ny famarana ny lesoka.
Ny vakin'ny efitrano fandroana Centre dia nandalo ny fitsirihana sira-menaka, midika izany fa mahatohitra ny korosi.
Ny vokatra dia tsy hiteraka olana static velively.
Tsy misy burrs, scratches na spotte eto amboniny.
Elektronika vita amin'ny vita, ny vokatra tsy mahazo oxidization mihitsy.
SKU: 2320700 Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana finday Tags: Nickel nopotehina, mahazatra, tatatra, lavator
Valizy kapila vita amin'ny seramika NSF, afangaro ny rano, 3-hole 4 in. Famolavolana centreset, mora apetraka, fifehezana 1 rano mafana sy mangatsiaka, nikela satin